समाचार – America Nepal
Monday, September, 2017
अमेरिकामा स्ट्यान्ड अप कमेडीमा डेव्यू गर्दै नेपाली चेली
३४ वर्षे नेपाली चेली शैली बस्नेत आजकल उत्साहित र चिन्तित एकपटक भइरहेकी छिन् । जतिजति सेप्टेम्बर २० तारिख नजिकिरहेको छ, त्यति त्यति उनको ढुकढुकी बढिरहेको छ । यी चेली त्यस दिन न्यूयोर्क शहरको प्रख्यात कमेडी क्लब, गोथम कमेडी क्लबमा डेब्यू गर्दै छिन् । न्यूयोर्कको उक्त कमेडी क्लबमा धेरै ठूलाठूला कलाकारहरुले आफ्नो प्रस्तुती दिइसकेका छन् । त्यही मञ्चमा आउने बुधबार शैली आफ्नो
रौतहटमा १५० सर्वसाधारण बाढीमा फसे
रौतहट : देवाहीगोनाही गाउँपालिका २ को जोहरटोलमा लालबकैया नदीले पूर्वतर्फको बाँध कटान गर्दा एक सय ५० सर्वसाधारण फसेका छन्। नदी कटान क्षेत्र निरीक्षण गर्न पुगेका प्रहरी हवल्दार विद्यानन्द यादव, प्रहरी जवान राज कट्टेल समेत बाढीमा फसेको रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सबै उक्त गाउँपालिकाका पक्की घरमा सुरक्षित अवस्थामा रहेको तर, उद्धारमा कठिनाइ भएको प्रहरीको भनाइ छ।
सप्तकोसीमा रातो बत्ती बल्यो, भारतले सबै ढोका खोल्न मानेन: नेपाल जोखिममा
सुनसरी : लगातारको बर्षाका कारण सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव बढेर यो बर्षकै उच्च भएको छ। पानीको बहाव उच्च हुँदा समेत भारतले कोसी ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै स्थानीयबासी रुष्ट बनेका छन्। पानीको बहाब प्रति सेकेण्ड २ लाख ७० हजार तीन सय ६५ क्युसेक पुगेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी विद्यानन्द माझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको नियन्त्रणमा रहेको
भारतमा पक्राउ परेका नेपाली युवकलाई छुटाउन एमाले नेता खनाल
इलाम, २७ साउन । आमाको उपचार गराउन दार्जिलिङको सिलिगुडी जाँदा आन्दोलनकारी भन्दै भारतीय प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएका नेपाली युवकलाई रिहा गर्न एमाले नेता झलनाथ खनालले पहल गरेका छन् । दार्जिलिङको सुकुनामा साउन १४ मा भएको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारी गोर्खाल्याण्ड समर्थकसँग ‘अनुहार मिलेको’ भन्दै इलामको सूर्याेदय नगरपालिका–१० का २७ वर्षीय उदयहाङ फागोलाई सोमबार आमाको उपचारका
सप्तकोसी नदीको बहाव उच्च, रातो बत्ती बालियो
धरान: पूर्वीपहाडी जिल्लामा सोमबारदेखि सुरु भएको वर्षा नरोकिएपछि सप्तकोसी नदीको बहाव उच्च भएको छ। बहाव बढेपछि कोसी ब्यारेजमा रातो बत्ती बालिएको छ। बहाव उच्च भएकाले कोसी ब्यारेजमा खतराको संकेतस्वरूप रात्तो बत्ती बालिएको सुनसरीका निमित्त प्रहरी प्रमुख डीएसपी प्रवीण धितालले बताए। मंगलबार सप्तकोसीको बहाव प्रतिसेकेन्ड एक लाख ९२ हजार ३ सय क्युसेक पुगेको धितालले जानकारी दिए।
जंगलमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिए नेपाल बैंकका प्रवन्धक
दाङ । बर्दियाको नेपाल बैंक लिमिटेड गुलरिया शाखाका प्रवन्धक प्रमोद बर्मा सोमबार झुण्डाइएको अवस्थामा बाँकेको अगैया जंगलमा भेटिएका छन् । तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका बर्मा मृत अवस्थामा अगैया जंगलमा भेटिएका हुन् । दाङ जिल्लाको घोराही निवासी बर्मालाई अगैया जंगलमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय
प्रहरीलाई पेस्तोलले हान्दै भाग्ने खत्रीको यसरी भयो मृत्यु
काठमाडौ: ललितपुरको कुसुन्ती स्थित अरुण वस्तीमा सोमबार गोली चलेको छ । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका लागू औषधको डिलर सञ्चालक प्रविण खत्रीकोको मृत्यु भएको छ । खत्रीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले दावी गरेको छ । खत्री आफैले आफैलाई कञ्चटमा गोली हानेको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीका अनुसार सोमबार बिहानदेखि दुई वटा पेस्तोल लिएर खत्री घरबाट निस्किएका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा
१२ वर्षकी बालिका बलात्कार, मेयरकै अघि ६० हजार दिएर गुपचुप पार्न खोजियो
भोजपुर, साउन २१ – १२ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा भोजपुरमा एकजना पक्राउ परेका छन् । षडानन्द नगरपालिका-७ केउरेनीपानीका ३२ वर्षका मेघराज श्रेष्ठले एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । बलात्कारपछि गाउँमै षडानन्दा नगरपालिकाका मेयर विरवल राई, उपमेयर मेरिका राई, चन्द्रबहादुर तामाङ र वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर राईसहितको छलफलमा पीडित बालिकालाई ६० हजार
डोटी जीप दुर्घटना : नौ जनाको मृत्यु
कञ्चनपुर – डोटीमा गएराति भएको जीप दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । गएराति ११ बजेतीर डोटीको बोगटान गाँउपालिकाको गगुडामा भएको दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु भएको तथा ४ जना गम्भीर र ३ जना समान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरिक्षक शिव बहादुर सिहका अनुसार शैलेश्वरी यातायातको से १ ज ७९१ नम्बरको जीप बोगटान ६
काठमाडौंमा सडकमै शव भेटियो
काठमाडौं, साउन २१—काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरको मुख्य सडकमा एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ । बानेश्वरको अल्फाबिटा नजिकैको मुख्य सडकबाट बाटो काट्दै गर्दा अन्दाजी करिब २२–२५ वर्षीय पुरुषको शव भेटिएको हो । मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छैन । तीव्र गतिमा आएको सवारीको ठक्कर बाट उनको मृत्यु भएको बानेश्वर प्रहरी वृत्तले जनाएको छ । बिहान करिब ५ बजेतिर बाटो काट्ने क्रममा तीव्र गतिमा आएको
America Nepal is the most popular nepali news portal website.The office is located at Saraswatinagar,Kathmandu.It is run by Nepal media Pvt. Ltd.
The main aim of this media is to enhance digital journalism and provide online readers with current news of the country
Copyright © 2016 America Nepal Media | All rights reserved.